Manulife ပညာရေး အသက်အာမခံ | အသက်အာမခံလုပ်ငန်း
သင့်ကလေးရဲ့ ပညာရေးက အကာအကွယ် ပေးဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်။
သင့်ကလေး အနာဂတ် တောက်ပဖို့ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှု ဖန်တီး ပေးပါမယ်
ဘယ်လို အကျိုးခံစားခွင့် တွေရမှာလဲ?
သင့်ကလေးရဲ့ အနာဂတ်ကို ကာကွယ်မှုပေးထားခြင်းကအဖိုးတန်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။ ဒါကြောင့် Manulife ပညာရေးအသက်အာမခံထားရှိပြီး ပညာရေးအသက်အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့် နှစ်ဆနဲ့အတူ အခုကတည်းက ကလေးတွေရဲ့ အိပ်မက်တွေအမှန်တကယ် ဖြစ်လာဖို့ ကူညီပေးလိုက်ပါတယ်။ သင့်ကလေးရဲ့ ပညာရေးက အကာအကွယ် ပေးဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်။
သင်နဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ရသူတို့က ပရီမီယံပေးချေမှု ပြီးဆုံးတဲ့နှစ်မှာ အာမခံကြေးငွေစုစုပေါင်းရဲ့ ၂၀ရာခိုင်နှုန်းကို စတင်ရရှိပြီး သက်တမ်းကုန်တဲ့အထိ နှစ်စဥ်ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍များ သင်ဟာရာသက်ပန်ကိုယ်လက်အင်္ဂါမသန်စွမ်း (သို့မဟုတ်) သေဆုံးခဲ့သည်ရှိသော် ‌ရှေ့ဆက်ပေးဆောင်ရမည့် ပရီမီယံကြေးကို ဆက်လက်ပေးသွင်းရန်မလိုပဲ ကင်းလွတ်ခွင့်ရမှာပါ။
နှစ်ထပ်ကွမ်း အကျိုးခံစားခွင့် ပရီမီယံကို ရွေးချယ်ခဲ့ရင် သင်ဟာရာသက်ပန်ကိုယ်လက်အင်္ဂါမသန်စွမ်း ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသော် (သို့မဟုတ်) သေဆုံးခဲ့သည်ရှိသော် အကျိုးခံစားခွင့်ရသူဟာ အာမခံကြေးငွေ စုစုပေါင်းရဲ့ ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်း ကိုရရှိမှာပါ။
ပရီမီယံကြေး ၅နှစ်ပေးဆောင်ရမည့် ၉နှစ်သက်တမ်း
ပရီမီယံကြေး ၇နှစ်ပေးဆောင်ရမည့် ၁၁နှစ်သက်တမ်း
ပရီမီယံကြေး ၁၀နှစ်ပေးဆောင်ရမည့် ၁၄နှစ်သက်တမ်း
Manulife Myanmar ရဲ့အာမခံပေါ်လစီဝယ်ယူထားသူများအတွက် COVID-19 ငွေကြေးကာကွယ်မှုအထူးခံစားခွင့်ကိုမတ်လ၃၁ရက်၂၀၂၁ခုနှစ်ထိတိုးမြှင့်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်။
COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရခြင်းအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်
COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ခံရခြင်းအကျိုးခံစားခွင့်အတွက် အသက်အာမခံထားသူသည် COVID-19 ကူးစက်ခံရမှသာ တောင်းခံနိုင်မည်။ ဆက်လျဥ်းစွာပင် COVID-19 ကူးစက်ခံရခြင်းအတွက် ယင်းအကျိုးခံစားခွင့်ကို အနီးစပ်ဆုံးအတူနေ မိသားစုဝင် (၃ ယောက်အထိ) ရရှိနိုင်ပါသည်။
COVID-19 ကြောင့် ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသမှု ခံယူရသည့်အတွက် အာမခံကြေးငွေ ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ်
အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်(ICU)တွင် ဆေးကုသမှုခံယူရခြင်းအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်
COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသောကြောင့် အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်(ICU)တွင် ကုသမှုခံယူရသည့်အတွက် အာမခံကြေးငွေ ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ်
COVID-19 ကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အတွက် ထပ်တိုးအာမခံကြေးငွေ ၆,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်
Manulife ပညာရေး အသက်အာမခံအကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက
ဘယ်အရွယ်ကစပြီးတော့ ဘယ်အရွယ်အထိ ပညာရေးအသက်အာမခံထားခွင့်ရှိလဲ?
အာမခံထားရှိခွင့်အတွက် အနည်းဆုံး ၁၈ နှစ်ပြည့်ရပါမယ်။ ၉ နှစ် အစီအစဉ်အတွက် အများဆုံး အသက် ၅၆နှစ်အထိ၊ ၁၁ နှစ် အစီအစဉ်အတွက် အများဆုံး အသက် ၅၄ နှစ်အထိနဲ့ ၁၄ နှစ် အစီအစဉ်အတွက် အများဆုံး အသက် ၅၁ နှစ်အထိ ထားနိုင်ပါတယ်။
၀ယ်ယူထားရှိနိုင်မယ့် အာမခံငွေကြေးပမာဏ အနည်းဆုံးနဲ့ အများဆုံးက ဘယ်လောက်တွေလဲ?
ပညာရေးအသက်အာမခံ‌ကြေးငွေ အနည်းဆုံး သိန်း၅၀ ကနေ အများဆုံး သိန်း ၁၀၀၀ အထိ ၀ယ်ယူထားရှိနိုင်ပါတယ်။
သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်ကာလအတွင်းမှာ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ဒါမှမဟုတ် နှစ်၀က်ကိုတစ်ကြိမ် ခွဲသွင်းလို့ရပါတယ်။
ငွေသားနဲ့ပေးသွင်းနိုင်သလို သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဘဏ်တွေကနေတစ်ဆင့် ဒါမှမဟုတ် အဲဒီဘဏ်တွေရဲ့ Digital Payment တွေကနေတစ်ဆင့် သုံးပြီးတော့လည်း ပေးသွင်းနိုင်ပါတယ်။
ပညာရေးအသက်အာမခံကြေးငွေ‌ ပေးချေပြီးတဲ့အခါ ပေါ်လစီသက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အချိန်မရွေး ပယ်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။ ပယ်ဖျက်ပြီးတဲ့အခါမှာ နှစ်အလိုက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ငွေတန်ဖိုး (Cash Value) ကို ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ငွေတန်ဖိုး (Cash Value) က ဆက်လက်မြင့်တက်နေမှာ ဖြစ်လို့ မပယ်ဖျက်ခင်မှာ သေချာစဥ်းစားဖို့တော့လိုပါတယ်။
ယခု အာမခံအကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက
Brochure ကို ကြည့်ရှုရန်
COVID-19 Brochure ကို ကြည့်ရှုရန်